Vavaka ho an'i Lazarosy Masina mahagaga. ? Ny marary, alika ary fahasalamana
Vavaka ho an'ny Masindahy Lazarosy fantatra hatramin'ny taloha fa mpanampy lehibe ny mahantra, marary ary biby. The vavaka ho an'i Masindahy Lazarosy Izy io dia fitaovam-piadiana mahery vaika nomena antsika ary amin'ny alalan'ny finoana no mahatonga antsika hanao fahagagana mahery araka izay ilaintsika.
Rehefa nandeha ny fotoana dia lasa mpitari-tolona sy mpiara-miasa lehibe amin'ny vondrom-pianakaviana miray ary an'ny Kubiana izay mivory isan-taona, ny 17 desambra, mba hankalazana ny fifalian'ny fahaterahan'ny olo-mahagaga toy izany.
1 Vavaka ho an'i Saint Lazarosy Iza moa i Saint Lazarosy?
1.1 Vavaka ho an'i Saint Lazarosy mahagaga
1.2 Vavak'i Masindahy Lazarosy ho an'ny marary
1.3 Ho an'ny alika
1.4 Ho an'ny fahasalamana
Vavaka ho an'i Saint Lazarosy Iza moa i Saint Lazarosy?
Ao amin'ny tenin'Andrimanitra no ahitantsika Lazariana roa; iray izay nomena anarana tao amin'ny fanoharana momba ny manankarena sy lazarasy izay namaritan'i Jesosy ny lanitra sy ny helo.
I Lazarosy faharoa dia rahalahin'i Marta sy María ary na iza na iza mpanohitra ny iray amin'ireo fahagagana lehibe nataon'i Jesosy Eto an-tany, ny fitsanganana amin'ny maty.
Ao amin'ny finoana katolika dia mitambatra ho iray ireo toetra roa ireo satria sarotra ny manasaraka azy ireo satria samy manana ny fitoviana lehibe ny tsirairay.
Izy dia fantatra ho mpanampy lehibe amin'ny biby izay ao anatin'ny harem-pialana, raha ny marina dia inoana izy fa mpiaro ny alika, saingy vokatra avy amin'ny finoan'ny olombelona tokoa io satria ny olo-masina manampy ny olona rehetra mila izany.
Notantarainy ny tantara fa niaina mandra-pahafatiny izy ary nalevina tao amin'ny a sarcophagus vita tamin'ny marbra izay tamin'ny 1972 dia hita niaraka tamin'ny sisa tavela tao anatiny.
Vavaka ho an'i Saint Lazarosy mahagaga
Masindahy Lazarosy, naman'i Jesosy Kristy sady rahalahiny ary mpiaro an'ireo mijaly!
Ianao izay nahafantatra ny fanaintainan'ny aretina sy ny fitsidihan'i Jesosy Kristy dia namerina ny fiainanao tany Betania, dia raiso tokoa ny fiangavianay, rehefa mangataka ny fanampianao ianao amin'ity ora mampahory ity.
Mivavaha amin'ny Ray Mandrakizay, mba hananantsika fahatokisana feno sy azo antoka amin'ny herin'i Jesosy.
Masindahy Lazarosy Fahagagana, natsangana tamin'ny herin'ny masin'i Jesosy Kristy, miangavy anao izahay amin'ny fotoana mampalahelo ny fahorianao sy ny fifaliana tsy manam-petra izay niainanao fony Jesosy nitondra ireo teny mamy nandefasanao anao avy tao am-pasana, mba hifona amin'ny Tompon'Andriamanitra amin'ny alàlan'ny fahaterahanao Omeo anay ny zavatra itokisanay aminao.
Nanaiky ampahibemaso ny Eglizy Katolika ny herin'i Saint Lazarosy ary manana izany ho toy ny iray amin'ireo olona masina izay ankalazana amin'ny finoana izy, koa araraoty ny fivavahany.
Amin'izany fomba izany no ahafahantsika manamarina izany ny vavaka izay miakatra eo alohan'ny seza fiandrianany dia tsy very vavaka na fifonana fotsiny fa lasa manitra fofona manoloana ny fanatrehany ary tonga eo amintsika ny valiny.
Ny fanaovana vavaka ho fotoana tena tsara tsy natao, na izany aza dia zava-dehibe ny manasongadina fa ny tena fahagagana dia ny fanaovana ny vavaka avy ao am-po ary ny fahatokisana fa tonga amintsika ny valiny.
Raha tsy atao an'izany dia tsy misy dikany sy tsy misy dikany izany.
Vavak'i Masindahy Lazarosy ho an'ny marary
Ry malalako Saint Lazariko, mpisolovava ahy, mpiaro ny masoko, mametraka ny fitokisako aminao aho, mametraka ny filàko, ny ahiahiko ary ny fanahiako, ny nofiko sy ny faniriako, ary mahalala ireo fahagagana maro izay efa natao taminao, mahalala ny fahatsarana izay ateraky ny tananao rehefa angatahana am-panetren-tena sy finoana ianao, anio dia manatona anao mpangataka aho, mangataka fanampiana sy famindram-ponao matanjaka.
Ry Saint Lazarisa sambatra, noho ny fanantenana kanto nampitondoka ny fonao hahatongavana amin'ny satrobonin'ny maritiora, ary noho izany faniriana mandoro izany dia hanome ny fiainanao ho an'ilay Ilay nanome anao anao indray rehefa avy nanary izany, omeo ahy reharehanao Saint Lazaranao ilay sarobidy ny fanelanelanana, mivavaha ho an'ny faniriako eo anatrehan'i Jesosy tsara, ilay namanao, rahalahinao ary nahasoa anao, ary mangataha fa amin'ny famindram-pony tsy manam-petra no anomezako izay angatahiko amin'ny foko rehetra ary amin'izany dia mety hahazo fanamaivanana amin'ny fahakiviana aho:
(lazao sa izay tianao hotratrarina)
ary raha mieritreritra ianao fa tsy mety izany dia omeo fiadanan-tsaina sy tsy milamina ny fanahiko ka antenaiko fa hametra-pialana ny fahatongavan'Andriamanitra.
Masindahy Lazarosy, rain'ny mahantra, miangavy anao aho, aza mijanona manampy ahy, asehoy ny tenanao ho feno finaritra rehefa manaonao foana sy mandray ny fangatahako amin'ny Tompo, omenao fitahiana sy fiarovana aho, hanamaivana ny alaheloko sy ny olako ary esory amin'ny fiainako ny ratsy rehetra sy ny fahavalo .
Amin'ny alalàn'i Jesosy Kristy, rahalahintsika sy Tompontsika.
Ireo vavaka izay natrehiny Ny olan'ny fahasalamana dia tena maika indrindra ary ity no lohahevitra iray izay fahagagana avy amin'Andriamanitra irery ihany no afaka manampy antsika.
Masindahy Lazarosy, izay mahalala hoe mijaly amin'ny aretina mahafaty ary maty koa ary niaina tamin'ny nofony izay atao hoe fitsanganana amin'ny maty, dia ilay olo-masina naseho hanampy antsika amin'ity toe-javatra ity.
Fantany izay mety ho zakain'ny faharatsiana ara-batana izay mahavita mamarana ny fiainantsika, ka izany no antony mahatonga azy ho mpisolovava tonga lafatra eo alohan'ny seza fiandrianana selestialy satria fantany fa azo atao ny fahagagana amin'ny fitsanganana amin'ny maty.
Dia handeha amin'ny vavaka ho an'i Saint Lazarosy ho an'ny alika sy biby isika.
Ho an'ny alika
Ry malalako malalantsika!
Ny fiainanao natolotra ny fanompoana ny Tompo no nitondra anao
Ny mankasitraka ireo zavatra kely eo amin'ny fiainana; Ny hasina masina ananan'Andriamanitra sy ny fiarahana amin'ireo biby mahatoky.
Mahafantatra bebe kokoa ny maha-zava-dehibe ny biby ianao
Ho fahasambarana olona.
Miaraka amintsika ireo rehefa mahatsiaro ho irery, fa tsy ao am-pony ihany no hitiavantsika ny fitiavana sy ny fitiavana.
Naratra mafy tokoa ny sakafako, izao
Ary amin'ny fahasalamana malemy ary izany no anontaniako anao amin'ny finoako rehetra
Enga anie izy hanasitrana azy amin'ny herinao mahagaga.
Henoy izao angatahiko ary aza avelako ho irery aho alohan'ny fitakiana ity.
Mivavaha amin'ny olon'i Lazarosy masina ho an'ny amboa amin'ny finoana lehibe.
Mpanatoky raharaha sarotra, mahantra y abandonados izay koa ny biby, indrindra fa ny alika. Vavaka io izay tsy dia milaza intsony ary ilaina izany satria ny alika dia zavamananaina mila ny fanampiantsika sy ny vavaka ataontsika.
Niatrika aretina koa izy ireo, fialana, hanoanana, alahelo ary fanaintainana. Izy ireo dia zavamananaina manana filàna ara-pihetseham-po sy ara-batana izay matetika tsy misy olona mikarakara ny famatsiana ary mampijaly azy ireo.
Ho an'ny fahasalamana
Ilay malalan'i Saint Lazarosy malalako;
Mpiaraka amin'i Kristy mahatoky ary vavolombelona amin'ny nofo
Ireo fahagagana amin'ny mesia.
Ho anao, anio, dia miondrika aho mangataka aminao amin'ny finoako rehetra
Azonao omena fahasalamana aho, izany fanomezana tsy mety resy izany,
Ka ny mamerina ny fanjakana izay nankafiziko foana.
Ianao no mahalala ny fanaintainana, ny aretina, ny fangirifiriana ary ny fijaliana.
Fantatrao izay tokony hoentin'ny aretina misy poizina
Ary isaory ny rindrina sy ny tarehy ho fanamaivanana.
Ny teniko, ry malala malala, atsangano any an-danitra aho
Mikatsaka famindram-po sy fanampiana ary fifaliana.
Raiso izy ireo amin'ny lambanao ary ataovy mendrika ahy izay angatahiko.
Tianao ny vavaka San Lazaro ho an'ny fahasalamana?
Mitaky lafiny maro amin'ny fiainana zavamananaina ny fahasalamana, miainga amin'ny filàna ara-batana sy ara-panahy ary izy rehetra dia samy manana ny lanjany avokoa.
Izany no antony mahatonga an'io vavaka io ho lasa iray lehibe indrindra.
Nasaina hanao izany isan'andro ary miaraka amin'ny fianakaviana hany ka tsara lavitra satria ankoatry ny maha-hetsika ara-panahy izay manamafy ny fototry ny fianakaviana, dia manampy antsika hahatsapa fiarovana mandritra ny fitsangantsangana isan'andro San Lázaro, mpampikambana amin'ireo fahasahiranana rehetra ireo, mifandraika amin'izany ho azy ireo Afaka hahatratra ny fandriam-pahalemana izy ireo ary miala sasatra ao anatin'ny fahasahiranana sy ny fitsapana.
Eny ny valiny dia eny, ny tsiambaratelo dia ny finoana izay itondrana ny vavaka alohan'ny alitaranao.
Izay rehetra angatahin-drainy hino, ho azontsika, dia fampanantenana azontsika ao amin'ny Baiboly Masina izany ary atao ho tanteraka ihany rehefa mino isika.
Izany no antony mahatonga ny vavaka ho fihetsika mazava ary tsy azo atao amin'ny fomba mahazatra.
Ny vavaka atao amin'ny finoana dia afaka manao ny zava-drehetra, eny fa na dia ny aretina mahatsiravina indrindra izay mety misy aza.
Hararaoty ny herin'ny vavaka nataon'i Saint Lazarosy.